သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: နေသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:29 AM
မလေးအိမ်မှာ ပန်းသီးပင်ရှိလား ။ ဟာ ကောင်းလိုက်တာ ။ မလေးရဲ့ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အပင်တွေအကြောင်း ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ပေးပါလား ။ တကယ် ကြည့်ချင်လို့ပါ ။
ပန်းသီးပွင့်လေးတွေ သိပ်လှ ။ နှင်းဆီဝါရှိလားဟင် ။
You are reallyagreat friend to others...
I'm proud to be your friend, Ma Layy...
BTW, do you know how to cook Apple-Fishpaste?
I wanna try that once inalifetime. Hahaha.
နွေပေါက်ရင် ပန်းတွေ၊ သီးပင်တွေအများကြီးထပ်တင်ပေးမယ်.. ဒီတစ်နွေလုံးဒါပဲတင်တော့မလားစိတ်ကူးနေတာ..နောက်မှ တင်လွန်းလို့ မကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုမရဘူးနော်.. အဲဒီနှင်းဆီအ၀ါပေါ့ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီကြမ်းလို့ သေသွားပြီ။
ထပ်မဖားနဲ့..:D တက်ဂ်ဘလော့ တမ်းပလိပ် လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီးသားနော်..ဒါပေမယ့် နောင်နှစ်မှလုပ်မယ်နော်..ဖြစ်တယ်နော်…